संसारलाई रुवाउने यि आमाको पिडा, सबैले एक सेयर गरिदिनुहोला - Pradesh Dainik
संसारलाई रुवाउने यि आमाको पिडा, सबैले एक सेयर गरिदिनुहोला
बिहिबार, असार १९, २०७६ , प्रदेश दैनिक
मोरङ, भनिन्छ मान्छेलाई सबैलाई पिडा हुन्छ तर पिडा पनि आम मानिसको जस्तै होस र सहन सक्ने होस । मोरङको पथरशिनिश्चरे नगरपालिका वडा नं. ५ निवासी चुडाकुमारी पौडेलको पिडा न कसैले सहन सक्ने छ न त कसैले अनुमान लगाउन नै सकिन्छ ।
वडा कार्यालयमा प्रदेश दैनिकको टिम अन्य विविध कामले नियमित झै रिपोटिङका लागि पुगेको थियो । सो समयमा चुडाकुमारी पौडेल आइपुग्नुभयो र भन्नु भयो बाबु मैले पानी खान पाइन त बाबा कल कहिले दिन्छौँ ? यो पिडा उहाँले हामीलाई नभएर वडा सदस्इ चेतेन्द्र खड्कालाई राख्नुभएको थियो । हहामीले चासोका साथ उहाँको पिडालाई अझै खोतल्ने प्रयास ग¥यौँ । जब उहाँ आसु खसाल्दै आफ्नो पिडा सुनाउनुभयो हाम्रो मनले थाम्न सकेन र एउटा उहाँको पिडादायी कथा सबै पाठक, दर्शकहरु माझमा राख्ने बिचार ग¥यौँ ।
उमेर ८० नागिसकेकी वृद्धा उहाँलाई आफ्नो उमेर पनि ठ्याक्कै कति हो विर्सिसक्नु भएछ । “उहाँकै भनाइ अनुसार खालि खुट्टै हिडेर दिनभरी मागेर चामल, चिउरा भेला गरेर बोकेर घर जान्छु बाबु, यहाँ पिठिँयुमा बोक्नुपर्छ बोक्न पनि सक्दिन । घरमा कोही छैन् । ६ जना छोराछोरी सबै आफ्नो बाटो लागे म बुढिलाई एउटा लाटो छोरो छ । सबै भूइमै दिसापिसाप गर्छ छोडेर हिड्न पाइदैन बाबु के गर्नु यो उमेरमा धेरै दुःख गरेँ बाबा मैले, लाटो छोरो छ खुट्टामा साँलोले बाँधेर छोड्छु अनि बेलुका घर पुगेपछि खोलिदिन्छु, नभए हराइजान्छ कहाँ जान्छ कहाँ खोज्नु ? घरमा भएको एउटा कल पनि छोरो आउदाँ बेचेर गायो बाबु नुहाउन पनि पाइन, पानी खान पनि पाइन यो उमेरमा ।”
यति गफ गरेपछि हामीले एउटा भिडियो बनाउने निर्णय ग¥यौ र यि आमालाई केही सहयोग जुटाउने प्रयास गरेका छौँ । यस वडा नं. ५ को कार्यालयबाट वडा सदस्य समेत गएर उहाँको घरको पनि भिडियो बनाएका छौँ । वडा सदस्य चेतेन्द्र खड्काले एक थान कल सहयोग गरिसक्नु भएको छ । उहाको घरमा शशौचालय छैन् । घरपनि उस्तै छाप्रो छ । सोच्नुस त तपाइको परिवारको कोही यो अवस्थामा भएको भए ?
आशा छ सबैको सानो सानो सहयोगले उहाँलाई राहत हुने छ । उहाँको तपाइले जे सक्नुहुन्छ त्यही सहयोग गर्नुहोस । अरु केही नभएपनि एक सेयर गर्न त सक्नुहुन्छ नि ? जसले गर्दा यो भिडियो ति सहयोगी मन सम्म पुगोस । बाकीँ कुरा भिडियोमा हेर्नुहोला………